FMUSER Solid State 1kW FM Starpoint Combiners for sale
Isku-xidhaha Laanta FM
N-Channel 1kW Solid State FM Starpoint Combiner 1000W Nooca Golaha Isku-dhafka iibka ah
Ku saabsan Solid-State 1KW FM Starpoint Combiner
Halkee laga iibsan karaa ugu fiican Isku-duwaha FM?
FMUSER waxay ahayd mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha qalabka baahinta hormuudka u ah ku dhawaad ​​nus qarni. Laga soo bilaabo 2008, FMUSER waxay abuurtay jawi shaqo oo kobciya wada shaqaynta hal-abuurka leh ee ka dhaxaysa shaqaalaha horumarinta injineernimada xirfadda sare leh iyo koox wax soo saar leh. Iyada oo loo marayo niyaddan iyo u heellanaanta wada-shaqeynta dhabta ah, FMUSER waxay awood u yeelatay inay abuurto qaar ka mid ah qaybaha elektaroonigga ah ee ugu hal-abuurka leh, iyada oo adeegsanaysa mabaadi'da wakhtiga la tijaabiyay ee shalay oo lagu daray sayniska horumarsan ee maanta. Mid ka mid ah guulaha aan ku faano, iyo sidoo kale doorashada caanka ah ee macaamiisheenna badan, waa Nidaamka Isku-dhafka FM-ka ee xarunta raadiyaha.
"Waxaa laga yaabaa inaad ka heshid wax wanaagsan oo ka socda FMUSER. Waxay daboolayaan dhammaan noocyada kala duwan ee awoodda Isku-duwaha Gudbinta, Isku-duwaha FM ee ugu fiican ee iibka ah, awoodda u dhexeysa 1kw ilaa 15kw, 40kw ilaa 120kw"
Qaybta Xigta waa Talo-siinta Isticmaalka Isku-xidhaha FM-ta | Skip
Halkee laga iibsan karaa Isku-duwaha FM-ka ugu Fiican?
Talo-siinta Isticmaalka Isku-xidhaha FM-ta
Maxaad ugu baahan tahay Isku-xidhaha FM?
FMUSER Solid State 1KW FM Combiner Si Wanaagsan Ugu Shaqeeya:
Idaacadaha FM-yada xirfadda leh ee heer gobol, degmo, iyo magaalo
Idaacado FM dhexdhexaad ah iyo mid weyn oo leh baahiyo aad u ballaaran
Idaacad FM ah oo xirfad leh oo leh in ka badan malaayiin daawadayaal ah
Hawl-wadeennada raadiyaha ee raba inay qiimo jaban ku iibsadaan war-fidiyayaasha raadiyaha FM-ta ee waaweyn
Thanks to warshadda heerka caalami, FMUSER, oo hormuud u ah soo saaraha qalabka baahinta, wuxuu si guul leh ugu adeegay dhammaan noocyada macaamiisha isagoo siinaya xalal warbaahineed oo lagu kalsoonaan karo in ka badan 10 sano, hal shay ayaa la hubaa in uu yahay isku-darka gudbiye awood sare leh oo leh waxyaabo badan iyo wax soo saar, badanaa waxaa loo shaqeeyaa si uu u baahiyo barnaamijyo badan oo FM ah oo leh anteenooyin FM ah oo la wadaago.
Codsiga ee Isku darka-state 1kW FM Starpoint waxay dabooli kartaa baahida sii kordheysa ee baahinta, xallinta dhibaatada meel bannaan oo ku taal munaaradda anteenada. Waxaan wada ognahay in Isku-duwaha Starpoint idaacada waxaa kaloo loo yaqaanaa FM isku xidhaha laantiisa (ama Isku-darka Nooca Xiddiga), oo la mid ah Nidaamka Isku-dhafka FM tignoolajiyada ayaa ah xalka ugu fiican ee baahinta qiimaha jaban ee baahinta raadiyaha.
Anteenada FM waxay u baahan tahay inay ahaato anteeno fidsan oo leh awood koronto oo ku filan iyo band joogto ah oo buuxda si loo daboolo baahiyaha isku xirka FM. Dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo hawleed, habab kala duwan oo magdhow ah ayaa loo baahan yahay si loo waafajiyo saamiga mowjadaha taagan ilaa heerka farsamada caadiga ah, taas oo ka dhigaysa isku-darka FM-ka mid loogu dabaqi karo nidaamka Isku-dhafka FM ee xarunta raadiyaha FM.
The FMUSER 1kW gudbiye iib ah, kaas oo quseeya tignoolajiyada horumarsan ee RF iyo tignoolajiyada CAD ee ugu dambaysay, kaas oo leh 2 dalool (N channels) wadar ahaan dekedaha wax soo geliya, taas oo macnaheedu yahay inay ka gudbin karto calaamadaha dhawr lamaane oo FM-ka adag ee FM-ka ah ee isu dhigma. Waxaa si aan kala go' lahayn u naqshadeeyay oo u horumariyay sannado badan farsamoyaqaannadayada RF ee khibradda leh, taas oo macnaheedu yahay tan Isku duwaha FM awood sare oo iib ah la yimaada tayo la isku halayn karo iyo qiimo jaban.
Haddi aad tahay rookie ama khabiir ku ah tignoolajiyada baahinta RF, waxa loo baahan yahay in la ogaado in Isku-duwaha kanaalka N waa qayb muhiim ah waxayna samaysaa isku xidhka isku xidhka ka horeeyay iyo kuwan soo socda ee nidaamka gudbinta TV-ga. Shaqadiisu waa in ay ku xidho wax soo saarka gudbiyaha kanaalada kala duwan hal kanaal si loogu isticmaalo hal anteeno dhowr Qalabka baahinta FM-ka ee xarunta raadiyaha.
Sababtoo ah anteenadu waa qaali, munaaradda anteenaduna waxay yeelan kartaa anteenooyin xaddidan, isku dhafka FM wuxuu si weyn u dhimi karaa qiimaha habka gudbinta FM/TV.
FMUSER waxay daboolaysaa noocyo kala duwan isku darka gudbiye iib ah, sida isku-darka dheellitiran ee FM, isku-dariyaha nooca xiddiga (isku-darka laanta ama isku-darka Starpoint), isku-darka isku-dhafka ah, iwm., wuxuu awoodaa inuu buuxiyo shuruudo kala duwan. Alaabtani waxay gaadhaysaa hawlgab ku habboon, waxay la kulmeysaa heerar awoodeed oo kala duwan iyo moodooyin kala duwan oo isku dhafan. Xalka gudbinta soo noqnoqda ee wireless-ka ee gaarka ah iyo qaabka guud ee nidaamka iska ilaali dib u isticmaalka shaandhada, ka soo iibso isku dhafka FM FMUSER waxay yarayn kartaa lumitaanka gudbinta nidaamka waxayna badbaadin kartaa kharashkaaga.
v Halkee laga iibsan karaa Isku-duwaha FM-ka ugu Wanaagsan v
Talo-siinta Isticmaalka 1kW FM Combiner
Qaybta hore waa Halkee laga Iibsan karaa Isku-duwaha FM-ka ugu Fiican | Skip
Isku-darku waa aalad dadban, kaasoo sita awood ka badan gudbiyaha FM. Sidaa darteed, ka dib rakibidda iyo hagaajinta, looma baahna in mar kale la hagaajiyo. The 2 dalool FM isku dhafka waxaa loo baahan yahay marka ay lagama maarmaan tahay in la gudbiyo calaamadaha badan ee hal anteeno ah. Haddii aan la isku darin saxda ah, calaamadaha ayaa is dhexgali doona gudbiyaasha midba midka kale, iyaga oo soo saaraya alaabooyin isku dhafan.
Waxyaabo dhowr ah oo ay tahay in la ogaado marka la isticmaalayo isku xirka 1kW FM
Haddii aad tahay injineer baahinta xirfadle ah, waxaa lagama maarmaan ah in aad taqaanid sida kuwaas qalabka baahinta qolka rack shaqada, oo ay ku jiraan mabaadi'da aasaasiga ah ee qalabka baahinta FM, qalabka idaacadaha sida Gudbinta FM-ka, anteenada FM, isku dhafka RF, iwm. Nasiib wanaag, waxaan haynaa kooxda farsamada FM ee ugu fiican oo kaa caawin karta dhammaan noocyada sida-iyo dhibaatooyinka, iyo sidoo kale waxaan haynaa kuwan soo sheegnay. Qalabka baahinta FM-ka oo iib ah, Dhammaantood waa tayada baahinta ugu wanaagsan, tusaale ahaan, xalalka baahinta FMUSER dhamaantood si gaar ah ayaa loo habeeyey si loo daboolo baahiyaha idaacadaha kala duwan, iyada oo aan loo eegin qiimaha ama waxqabadka xalka baahinta, FMUSER had iyo jeer waa kan ugu fiican.
Qaybta hore waa Talo-siinta Isticmaalka 1kW FM Combiner | Skip
Qaybta Xigta waa Maxaad Ugu Baahan Tahay Isku-Duwaha FM | Skip
Macaamiil badan ayaa noo yimaadda oo weydiiya, "Haye, noocee ah Isku darka FM iib ah waa kuwa ugu caansan? Waa maxay qiimaha isku-darka FMUSER UHF/VHF?", Waxyaabaha soo socdaa waxay ku saabsan yihiin sida loo doorto nidaamka isku-darka ugu wanaagsan xaruntaada baahinta.
Saaxiib, haddii ay arrintu ku saabsan tahay hawl-maalmeedka raadiyahaaga, hadday tahay idaacad FM ah iyo hadday tahay TV-ga qaranka, ma doonayso inay maalinta ay shaqadeeda bilaabato ay ka joogsato sababo badan oo yaab leh.
Inta badan idaacadaha macaamiisheena, waxaa jira dhowr gudbiye FM ama gudbiyaasha TV-ga dowladda adag. Waqtigan xaadirka ah, kuwa isku-darka hooseeya ma dabooli karaan baahiyaha casriga ah ee gudbinta xirfadlayaasha badan ee kanaalka. Waxaad u baahan tahay qalab ka fiican. FMUSER waxay ku dhacdaa inay daboosho ku dhawaad ​​dhammaan isku-dariyeyaasha kanaalka badan ee xirfadleyda ah ee aad ka heli karto suuqa. Aan wada sheekeysano, hubaal waxaad heli doontaa kan ugu fiican
Maxaad u oggolaan weyday dhagaystayaashu inay ku raaxaystaan ​​barnaamij raadiyow ka wanaagsan inta aad weli awooddo. Dhagaystayaashaadu runtii diyaar ma u yihiin inay dhagaystaan ​​barnaamijyada raadiyaha ee ay ka buuxaan buuqa daran? Sida loo helo tayada barnaamijka ugu dambeeya ee raadiyaha ayaa noqotay mid ka mid ah yoolalka qaar badan oo ka mid ah macaamiisheenna ku celcelinta. Dabcan, dhib ma leh oo aad tahay idaacad yar oo magaalada ku taal ama raadiyaha qaranka, ma rabto inaad lumiso dhagaystayaashaada qiimaha leh. Nasiib wanaag, waxaad ku bilaabi kartaa cusboonaysiinta qalabkaaga baahinta xirfadlaha ah, marka aad heli karto qalab idaacadeed oo shaqo badan leh oo leh qallooc aad u hooseeya, luminta galinta, iyo VSWR hoose, isku-darka RF ee FMUSER, tusaale ahaan, fadlan haka labalabeyn. Aad baanu ugu faraxsanahay inaan u adeegno adiga iyo dhagaystayaashaada
Qalab noocee ah ayaa lagu magacaabi karaa qalab warbaahineed oo heer sare ah? Tani waa su'aal mudan in laga fikiro. Tusaale ahaan isu-duwaha. Boqolaal jawaab celin iib ah oo isku-darka RF-ga ah ee lagu iibiyay adduunka oo dhan, waxaan helnay waxyaabo xiiso leh: in ka badan kala bar macaamiisheena ayaa sheegay in aysan tixgelin qiimaha iyo muuqaalka markii ugu horeysay markii la sameeyay baaritaan. Taas beddelkeeda, waxa soo jiitay tafaasiil ay dadka caadiga ahi dheg jalaq u siin waayeen, tusaale ahaan, markii David oo Liverpool ka tirsan uu aad u xiiseeyey mid ka mid ah xalalkayaga baahinta raadiyaha ee idaacada dawladda hoose, waxaanu siinay dawlad adag1kw isku-darka gudbiyaha oo leh saddex godad. Muuqaalka ugu weyn ee qaabkani waa qaab-dhismeedkiisa fudud iyo isku-dhafka ku-meel-gaadhka ah ee ku habboon. Dhab ahaantii, idaacada David waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan aagga, golahaas 1kw isku dhafka ah ayaa wali u adeegaya David iyo dhagaystayaashiisa tan iyo 2009. Dabcan, tani waa mid ka mid ah jawaab celinta iibka ka dib ee ugu fiican ee isku dhafka RF. Macaamiil badan oo kale ayaa qiimeeyay in isku-darkayaga uu leeyahay koror heerkul yar, naqshadaynta awoodda awoodda koronto ee xirfadleyda, isku-darka awoodda, iwm. Waxaan leenahay karti iyo kalsooni aan ku siinno adeeg baahinta oo wanaagsan
Waxaan heysanaa kuwa ugu fiican Isku-xireyaasha FM-ka-badan ee kanaalka ah oo iib ah, ka iibso isku-darka gudbinta awooda u dhaxaysa 4kW ilaa 120kW FMUSER! Gaar ahaan, waa 4 kW, 15 kW, 40 kW, 50 kW, 70 kW, 120 kW FM CIB isku darka 3 ama 4 kanaal, isku darka FM CIB ee la heli karo oo leh kanaalo badan oo FMUSER ah, iyo inta jeer ee leh 87 -108MHz, si fiican, Waxa kale oo loo yaqaan isku-dariyeyaasha isku-dheelitirka FM-ka ah, kuwaas oo gebi ahaanba ka duwan kuwa iskudariyeyaasha nooca xiddigaha iibka ah; Marka laga reebo isku dhafka isku-dheelitirka ah, isku-dariyeyaasha Starpoint sidoo kale waa mid ka mid ah noocyada FM-yada ee ugu iibinta badan, awoodda u dhexeysa 1kW ilaa 10kW, gaar ahaan, waa 1kW, 3kW, 6kW, 10kW FM Starpoint isku-dariyeyaasha leh 3, 4, ama 6 channels. , iyo inta jeer ee leh 87 -108Mhz, noocyadan isku-dariyeyaasha waxaa sidoo kale loo yaqaannaa iskudariyeyaasha nooca xiddigaha.
Waxaan sidoo kale haysannaa kanaalka badan ee ugu fiican Isku darka UHF/VHF TV iib ah, iibso isku-dariyeyaasha TV-ga kuwaas oo awood u dhexeeya 3kW ilaa 40kW FMUSER!
Isku-dariyeyaashani waa 1 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW, 8 kW, 8/20 kW, 10 kW, 15 kW, 20kW, 15/20 kW, 24 kW, 25kW, 40 kW VHF/UHF TV isku darka 3 , 4, 6 channels ama filtarrada waveguide dual-mode, waxa kale oo loo yaqaan isku darka faraca FM-ka ah, qaar ka mid ah waa nooca adag ee dawladda ama nooca golaha, qaar ka mid ah waa isku-dariyeyaasha nooca L-band, laakiin inta badan waa isku-dariyeyaasha CIB ama nooca xiddigaha (ama dhibicda Xiddiga), oo leh inta jeer ee u dhaxaysa 167 - 223 MHz, 470 - 862 MHz, 1452 - 1492 MHz
Gaar ahaan marka aad mas'uul ka tahay qaar ka mid ah qalabka baahinta FM-ka ee qiimahoodu sarreeyo, tusaale ahaan, isku-darka FM-ka awoodda sare leh, waxaa looga baahan yahay:
v Talo-siinta Isticmaalka Isku-darka FM-ta v
Waxaad u baahan tahay 1kW FM Combiner In ka badan Weligeed
Waa maxay sababta isku-darka RF uu aad muhiim ugu yahay?
FMUSER waxay bixisaa kanaal badan oo kala duwan Duplexers iyo triplexers iib ah in la isku daro analoogga iyo HD Radio digital signal FM. Alaabooyinkaan waxaa ka mid ah 10 dB Hybrid Injectors, Reverse Fed Constant Impedance Isku-xidhayaasha Kanaalka FM iyo Diplexer Waxtarka sare leh.
Maxaad Ugu Baahan Tahay Isku-Duwaha FM-ta Awood Sarreysa Xaruntaada Raadiyaha?
Qaadashada kanaalada N Gudbiye isku dar Tusaale ahaan, aaladda RF-da ee isku dhafan ee noocan oo kale ah waxay ku gudbin kartaa calaamado gudbiye badan oo kala duwan Anteenada gudbiyaha FM, taas oo macnaheedu yahay iyadoo la isticmaalayo qalabkan baahinta, idaacadahaas warbaahintu waxay ku baahin karaan calaamado badan iyagoo isticmaalaya HAL-gudiyaha gudbiye isku mar halkii ay isticmaali lahaayeen TENS OF sets of FM .
Qalabka muhiimka ah ee tiknoolajiyada munaaradda la wadaago waa isku-darka kanaalka badan. Isku-darka FM/UF/VHF ee wanaagsan ayaa si toos ah u wanaajin kara waxqabadka nidaamka gudbinta calaamadaha oo dhan.
Intaa waxaa dheer, isku-darka wanaagsan ee FM/UF/VHF wuxuu badbaadin karaa kharashka dejinta anteenooyin badan, gaar ahaan xarumaha gudbinta magaalooyinka qaarkood, hoos u dhigista qiimaha iibka ee qalabka gudbinta RF ayaa ah habka ugu waxtarka badan ee lagu ilaaliyo shaqada xarunta FM/TV. .
At fmradiobroadcast.com, waxaan leenahay shaqaale khibrad leh oo diyaar u ah inay ka jawaabaan su'aalo kasta oo laga yaabo inaad qabtid oo ku saabsan helitaanka isku-darka RF ee saxda ah. Xor baad u tahay inaad nala soo xidhiidho wakhti kasta adoo booqanaya fmradiobroadcast.com ama wac +86 - 139 - 22702227. Had iyo jeer waxaanu nahay mid ka mid ah soosaarayaasha isku dhafka FM-ka ugu fiican.
U soo iibso 2 Gudubiyaha Daloosha ee Xarunta Raadiyaha? Waa kan meesha saxda ah!
FMUSER waa mid ka mid ah soosaarayaasha gudbiyaha ugu wanaagsan ee soo saara 4 kanaal gudbiye iib ah oo ku dhow 200+ waddan iyo gobollada adduunka oo dhan, waa kuwan kuwa aad ka iibsan karto isku-dariyeyaasha gudbinta:
Tusmada Korontada ee Muhiimka ah ee 4 Chan 1kW FM Combiner
A 1kW gudbiye adag oo leh kanaalada N laga bilaabo FMUSER waxa loo istcimaalaa in lagu daro RF laga helo ilo kala duwan. Isku darka FM-yada waxaa loo isticmaali karaa codsiyo badan oo kala duwan si loo gaaro natiijooyin kala duwan.
Faa'iidada baaxadda leh ee intaas le'eg, waxay noqon kartaa hawl adag marka ay timaado doorashada isku-duwaha FM-ta saxda ah ee baahiyahaaga. Asal ahaan, marka aad dooranayso a Isku duwaha gudbiyaha badan ee kanaalka, waa in la tixgeliyo qeexitaannada cabbirrada waxqabadka muhiimka ah, luminta gelinta, go'doominta u dhexeeya dekedaha, u dhowaanshaha baaxadda calaamadaha kala qaybsanaanta, iyo u dhawaanshaha marxaladda calaamadaha ee calaamadaha kala qaybsan.
Range Joogtaynta: 87 - 108mhz (kooxaha baahinta wax-ka-qabashada soo noqnoqda oo dhan)
Awoodda Awoodda: Awoodda awoodda isku-darka kanaalka badan waa in lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo awoodda gudbiyaha FM.
Qaybaha Muhiimka ah si loo dhiso 4 kanaal isku darka gudbiye
v U laabo sababta aad ugu baahan tahay isku-xidhaha FM
Qaybta hore waa Maxaad Ugu Baahan Tahay Isku-Duwaha FM | Skip
Ku laabo Halkee laga Iibsan karaa Isku-duwaha FM-ka ugu Fiican | Skip
1kW Solid-State FM Combiner Point x 1PCS
Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Isku-Duwaha 1kW FM
Tusmada Korontada ee FMUSER 1kW FM Starpoint Combiner (Tixraac Kaliya)
Tusmada Korontada ee FMUSER 1kW Xidigta Nooca Isku-dhafka ah (Tixraac Kaliya)
3-god ama 4-god filtarrada
Hab-dhismeedka la tolay iyo kuwa badan naqshadeynta xarunta baahinta
Naqshad is haysta oo leh Nooca Golaha
bandwidth la habeeyey
Isku-duwaha FM-ka Adag
N x 1 kW (N <5)
D 0.3 dB
D 18 dB
D 32 dB
465 720 1610 mm
~ 80 kiilo
v U laabo nuxurka ▲